About isu - AlorAir
AlorAir chake chaibva pane muuzivi pakupa kukosha, indasitiri vaitungamirira zvinhu uye kuita pamwe hunoshamisa vatengi rutsigiro. Tingaita sei kuzadzisa? With nyika-kirasi kugadzira kugona, rakakura R & D zvivako uye vakazvitsaurira chikwata neshamwari kutsigira pamberi uye mushure sero.
In America, tine kuparadzirwa hubs kumabvazuva uye kumadokero kwemhenderekedzo uye kukura richikurukura dealers uye Distributors. Tinewo matavi muEurope, Australia uye Asia.
chigadzirwa mutsetse yedu iri parizvino dzirambe misika miviri - bhesimendi / crawlspace uye mafashamo / kudzorerwa.
Nokuti musika mafashamu / pokudzorerwa, tine yakazara mutsetse dehumidifiers - zvose chinjikira uye rusvingo nemunhu. With mubatanidzwa mukirasi kutungamirira features, siyana vanokwanisa kusarudza, uye zvakanaka nazvo, kuti dehumidifiers chokwadi kuva kufarira. Kuti Rumbidza dehumidifiers, tine blowers uye hepa scrubbers kubatsira vari kuomesa uye remediation kuedza.
crawlspace uye bhesimendi yedu zviyero vane kirasi kutungamirira zvinhu zvakadai digitaalinen kuzvidzora, nyore kuwana, chivhariso-N-play zvinoriumba uye kunyange Integrated condensate pombi yedu chinjikira crawlspace chikwata! Wedzera idzi, chiine lightweight design, siyana filtration zvokusarudza, kure kuzvidzora uye ducting zvokusarudza, zviyero izvi ruchaita kubudikidza installers uye vatengi.
AlorAir zvigadzirwa vane certifications siyana zvichienderana yavo chinangwa kushandiswa kusanganisira Energy Star zvokusarudza, CE, ETL Saa, SGS uye TUV. zvigadzirwa edu zvakagadzirirwa, akakudziridza uye akaedzwa inishuwarenzi soro nenhanho unhu kuti vatengi vedu. mainjiniya edu kuramba kusunda hamvuropu itsva kuita mumatunhu uye zvinhu kufadza vatengi vedu.
Basa redu kuna vanogara innovate uye kupa yakanakisisa zvigadzirwa kuti mukuru kukosha. AlorAir anopikira kushandisa zvakanaka zviwanikwa, ano, midziyo uye pashure-sale kutsigirwa kuti ichi basa zvechokwadi kuti vatengi vedu.